Akon’ny « Can 2019 » tanterahina any Egypta | NewsMada
Akon’ny « Can 2019 » tanterahina any Egypta
Nametraka “écrant géant” etsy amin’ny Parvis Analakely ny CUA. Natao hijeren’ny rehetra ny fizotry ny “Can” izany, indrindra ny fihaonan’ny Barea sy ny Voromahery tonizianina. Nanafana izany hetsika izany ireo mpanakanto maro samihafa malaza amin’izao fotoana izao.
Nihiaka ny « Alefa Barea » hatramin’ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika. Naneho ny fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy avokoa izy ireo. Anisan’izany ny masoivoho amerikanina, ny Koreanina, ny Pnud sy ireo sampandraharahaha rehetra an’ny Firenena mikambana… Niarahaba sahady sy nidera ny Barea koa ny filoha kaomorianina…
Nilaharana lavabe ny fividianana “tee shirt” sy ireo kojakoja ahitana ny anarana Barea, omaly teto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Anisan’izany ny teny Analakely. Teo koa ireo niketrika nivarotra fitaovana madinika, toy ny “auto-collant” na ny “porte clé” na koa ny sarin’ireo mpilalaon’ny Barea. Manampy ireo ny kiririoka sy ny “bampamp”…